Mamokatra Ny Adin’i India Amin’ny Tsy Fanjarian-tsakafo Manjo Ny Ankizy · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Karima Benkrid
Voadika ny 09 Novambra 2015 3:32 GMT
[Lahatsoratra niaingàna, nivoaka voalohany tamin'ny 26 Septambra 2015]. Kambana mirahavavy samy fito volana i Puja sy Art. Teraka tao amin'ny vohitra kely antsoina hoe Madhubani Ghat ao amin'ny distrikan'i Champaran atsinanan'ny fanjakàna Indiana Bihar. Tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny ray sy renin'izy ireo, Sabita et Hari Giri, izay avy amin'ny vondrom-piarahamonina voahilikilika ara-tsosialy, tsy manana fahafahana loatra hiantohana fahasalamana mendrika ho an'ireo zanany izy ireo. Tao anatin'ny fandaharanasan'ny UNICEF ho an'ilay vohitra, nanaovana fitiliana sao misedra tsy fanjariana ara-tsakafo lalina sy mafy ireto kambana mirahavavy ireto (MAS) ary dia hita fa tratra i Puja sy Arti. Tsy ny azy ireo ihany no tranga hita.
Roapolo isanjaton'ireo ankizy latsaky ny dimy taona ao India no tratry ny tsy fahampian'ny lanja noho ny tsy fanjarian-tsakafo tafahoatra, izay manome mihoatra noho ny ampahatelon'ireo zaza tsy ampy lanja manerana izao tontolo izao. Araka ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny UNICEF momba ny ankizy, manodidina ny 30 isanjato amin'ireo ankizy indiana latsaky ny dimy taona no zara raha misakafo. Zava-misy mampalahelo ao amin'ny firenena izany, izay firenena ahitàna fivoarana ara-toekarena goavana, fipoahan'ny fandrosoana teknolojika ary mivoatra amin'ny sehatra samihafa ihany koa.
Fepetra hiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo.
Ankoatry ny fizarana sakafo antoandro any an-tsekoly, misy hetsika vitsivitsy ihany koa natao hifehezana ny tsy fanjarian-tsakafo, toy ny Sampandraharaha Ifotony ho Fampandrosoana ny Ankizy (hatramin'ny 1975), ny Tahirimbola Nasionaly ho an'ny Ankizy (natsangana nandritry ny fankalazana ny Taona iraisampirenena ho an'ny ankizy tamin'ny 1979), ny Drafitra Nasionaly Hiasàna ho an'ny Ankizy, ny Iraka ho an'ny Fahasalaman'ireo eny Ambanivohitra ary ny Tahirimbolan'ny Firenena Mikambana ho an'ny Ankizy.
Mankalaza ny Herinandrom-pirenena ho an'ny Ankizy i India isantaona, manomboka ny 1 hatramin'ny 7 Septambra, ka amin'io ny firenena no miezaka mandrisika ny fahatongavan-tsaina momba ny maha-zava-dehibe ny fihinanana sakafo sy ny vokatra goavana aterany eo amin'ny fandrosoana, ny famokarana, ny fivoarana ara-toekarena ary farany ny fandrosoan'ny firenena. Ny lohahevitra ho an'ity taona ity dia ny “Sakafo Tsara Kokoa, fanalahidin'ny Fandrosoana” ary nasiana tsindrimpeo manokana ny fanentanana momba ny tsy fanjarian-tsakafo, ny sakafo ara-pahasalamana ary ireo fepetra mampihena ny tsy fanjarian-tsakafo. Eo ambanin'io fandaharanasa io, ny Filankevitra momba ny Sakafo sy ny Fisakafoanana, amin'ny alàlan'ireo vondrom-pirahamonina 43 ao aminy sy ireo sampana fanapariahana ny resaka sakafo hita any amin'ireo fanjakana tsirairay sy ny faritany, dia mifandrindra amin'ireo fikambanana tsy miankina sy ireo sampan-draharaha hafa mba hikarakara atrikasa, fiofanana fitarihan-dàlana ho an'ireo mpirotsaka eny an-kianja, lasim-panentanana sy fivoriana ho an'ireo vondrom-piarahamonina, momba ny atao hoe sakafo tsara kokoa.
Tonga nitondra ny drafitra azy manokana hiadiany amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ireo fanjakana tsirairay atao India. Araka ny angon-drakitra vaovao, vitan'ireo fanjakana sivy mahantra indrindra ao India ny nampihena ny tàhan'ny fahiazana tafahoatra nandritry ny taompolo farany teo.
Natomboka tamin'ny 2013, ny fandaharanasa Phulwari an'ny governemantan'ny fanjakan'i Chhattisgarh, natao ho an'ny ankizy eo anelanelan'ny 6 volana sy 3 taona, dia mikendry ny hitazonana azy ireo ho ao anaty fahasalamana, amin'ny fanomezana azy ireo sakafo sahaza. Efa voaomana ny hametrahana ilay drafitra any amin'ireo fari-pampandrosoana miisa 85 onenan'ireo foko aminà ditrika 19, miaraka aminà Foibe Phulwari 2850, sy vola 100 tapitrisa roupies (eo amin'ny 1,5 tapitrisa dolara US) natokana ho an'ireo foibe ireo. Fomba mitovy amin'izay ihany, ny Drafitra Nawa Jatan ao Chhattisgarh dia natao hiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, miaraka amin'ny fanoloran'ny UNICEF ny tohana teknika amin'ny alàlan'ireo iraka manao fanadihadiana ifotony any aminà vohitra 340 (panchayats) izay avo be tokoa ny tahan'ny tsy fanjarian-tsakafo. 26 tapitrisa ny mponina ao Chhattisgarh, izay vahoaka mameno foko iray ny 30 isanjato mahery amin'io. Manodidina ny ampahatelon'ireo ankizy ao an-toerana no zara raha misakafo, nefa ireo tarehimarika vao haingana dia mampiseho fihenàna goavana eo amin'ny isan'izy ireo, izay amin'ny ankapobeny, dia noho ireny tetikasa vaovao ireny.
Voalohany amin'ny karazany ao Chhattisgarh, nahita fahombiazana goavana ny fandaharanasa ‘Phulwari’ tamin'ny famongorana ny tsy fanjarian-tsakafo.
@ChouhanShivraj should learn from Chhattisgarh where kids in tribal areas are being fed eggs through Phulwari scheme http://t.co/ODNvEyOzzL — Supriya Sharma (@sharmasupriya) June 1, 2015
@ChouhanShivraj tokony hianatra amin'ny zavamisy ao Chhattisgarh, fa any ny zanak'ireo faritra ara-poko dia fahànan'ny fandaharanasa Phulwari amin'ny atody.
Araka ny fanadihadiana farany nataon'ny Fanisàna Klinika, Antropometrika sy Biometrika ao India (CAB), vitan'ireny fandaharanasa ireny tao Chhattisgarh ny nampihena ny isanjaton'ireo zaza tratry ny fahataràn'ny fitomboana niala tamin'ny 53 isanjato ho amin'ny 35 isanjato, sy ny fahiazana 53 isanjato ho amin'ny 39 isanjato, ho an'ireo zaza latsaky ny dimy taona.
Rajasthan, ilay fanjakana lehibe indrindra ao India, no misy ny 44 isanjaton’ ireo ankizy latsaky ny 3 taona iharan'ny fahiazana tafahoatra raha araka ny vokatry ny Fanadihadiana Nasionaly momba ny Fahasalaman'ny Fianakaviana. Nametraka foibe 38 ho fikarakarana ny tsy fanjarian-tsakafo ny governemanta ao an-toerana, ka tanjona amin'izany ny hanatsaràna ny fandraisana an-tànana ireo ankizy tratry ny tsy fanjarian-tsakafo henjana eny amin'ireo hopitalin'ny distrika. Araka ny antotan-taratasy iray avy amin'ny Ivon-toeram-panjakana momba ny Fahasalaman'ny Fianakaviana, ankizy 13.200 tsy ampy sakafo no efa noraisina an-tànana tamin'io fandaharanasa io.
Mba hizaràna fanampin-tsakafo nasiana otrikaina sy mineraly ho an'ireo ankizy tsy ampy sakafo, ny Fiarahamientana Erantany ho amin'ny Fisakafoanana Nohatsaraina, fandaharanasa iray ao amin'ny Firenena Mikambana sy ny governemanta indiana dia nametraka ny ozinina ao Banswara ho fakàna tàhaka amin'ny famokarana fanampin-tsakafo. Ilay ozinina, izay vehivavy folo avy ao an-toerana no tompony sy manodina azy, dia mamokatra ny Raj Nutrimix, fangaronà vary, kobam-barim-bazaha sy siramamy nampiana kasinga mahavelona tena ilaina, izay sady mampilendalenda ireo ankizy rahateo koa. Raj Nutrimix nofenoina otrikaina sy mineraly milanja telopolo taonina no mamelona isanandro zaza 6.000 latsaky ny telo taona sy vehivavy bevohoka manodidina ny 3.000 na mampinono, noho ny fisian'ilay fandaharanasa fiahiana ara-tsosialy napetraky ny governemantan'ny fanjakan'i Rajasthan. Mitodika amin'ny fiompiana manaraka ny fomba voajanahary ihany koa ilay governemanta ary manana drafitra sahisahy mikendry ny hanokana tany an'arivony hektara hanaovana izany, ny tanjona dia sady hiadiana amin'ny tsy fahampiana proteina, no hiadiana ihany koa amin'ny fambolena tsy maharitra ampiasàna zezika simika.
Mihevitra hanokatra bankin-drononon-dreny 10 vaovao ny ao Rajasthan mba hiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Fepetra iray mahomby amin'ny fampiasàna vola hiantohana hoavy tsara ho an'ny firenena, ny ankizy.
Araka ny fanadihadina iray vao haingana, misy ankizy 4.300 eo anelanelan'ny 6 volana sy 5 taona tratry ny tsy fahampian-tsakafo henjana ao Rajasthan, ary mila fandraisana an-tànana ara-pitsaboana sy fanampiana.
i Bihar, ilay firenena tsy mandroso indrindra ao India, dia miatrika olana goavana momba ny tsy fahampian-tsakafo. Araka ny tatitra 2012-13 navoakan'ny Iraka ho an'ny Fahasalaman'ireo eny Ambanivohitra ao Bihar, manodidina ny 80 isanjaton'ny ankizy latsaky ny dimy taona no ratsy sakafo. Ny tsy fahampian'ireo kasinga mahavelona hanina, ny tsy fisian'ny sampan-draharaham-pahasalamana tsara kalitao ary ny tsy fahampian'ny fahafahana mahazo fanafody amin'ny vidiny mora, dia samy miasa daholo miteraka ny fiakaran'ny tàhan'ny tsy fanjarian-tsakafo ho avo be ao amin'ilay fanjakana.
Hatramin'ny 2012, miasa aminà tetikady iray ahitàna fizaràny telo ny governemanta ao Bihar mba hampihenanan ny tsy fanjarian-tsakafo. Any amin'ireo faritra 38, nametrahan'ny governemanta foibe fanarenana misy farafara 30, mifantoka manokana amin'ireo zaza tratry ny tsy fahampian-tsakafo lalina. Ny fidirana amin'ny fanambadiana aloha loatra, ny vohoka mifanesy ary ny tsy fisian'ny fampinonoana no isan'ny mahatonga ny tsy fahampian-tsakafo, ary ireo fandaharanasa toy ny Tetikasa Fampandrosoana itofony ny ankizy, tantanan'ny sampan-draharahan'ny fiahiana ara-tsosialy, dia mikendry ny hanova io toedraharaha io. Natomboky ny sampan-draharahan'ny fahasalamana ihany koa ny fandaharanasa momba ireo kasinga mahavelona izay ahitàna ny ‘capsules’ otrikaina A sy fanampiana vy.
Zavamisy tena mamely mafy ao Bihar ny tsy fahampian-tsakafo lalina. Maherin'ny 50 isanjato amin'ny ankizy latsaky ny 35 volana no tratry ny fahiazana tafahoatra.
Tamin'ny 11 Oktobra 2014, natombok'i Jitan Ram Manjhi, praiminisitra fahiny, lehiben'ny Departemantan'ny fiahiana ara-tsosialy ny fanentanana iray antsoina hoe “Bal Kuposhan Mukta Bihar” izay ny tanjona dia ny hanenàna ny tsy fanjarian-tsakafo eny amin'ireo latsaky ny telo taona ankizy ho ambanin'ny 30 isanjato mandrapahatongan'ny 2017. Ampiasain'ilay fandaharanasa ny media sosialy sy ny tantara tsangana eny an'arabe mba hampitàna ny hafatra momba ny tsy fanjarian-tsakafo. Manatanteraka fitsidihana tokantrano matetika ihany koa izy, toy ireo mpiasa sosialy ao Anganwadi sy ireo olona avy amin'ny Mpirotsaka an-tsitrappo Nahazo Fankatoavan'ny Fahasalamana Sosialy, izay miresaka amin'ireo renim-pianakaviana momba ny olana mifandray amin'ny tsy fanjarian-tsakafo.
Efa ampolo taona ry Chhattisgarh, Rajasthan, sy Bihar no mitolona mandresy ny tsy fanjarian-tsakafo. Raha toa ka efa ahitàna fivoarana tsara ireo angon-drakitra ofisialy ary mampivoitra ny fandeha tsaran'ireo fandaharanasa isankarazany, mbola betsaka ihany ny tokony hatao.